ကျွန်ုပ်၏စမတ်ဖုန်းသည်ရေထဲသို့ကျသွားပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း။ | Gadget သတင်း
Jose Rubio | | ယေဘုယျ, လဲ tutorial
ယနေ့, ပိုပိုပြီးထုတ်လုပ်သူများဆုံးဖြတ်နေကြသည် သင်၏ကိရိယာများကိုအစိုဓာတ် (သို့) အရည်မှကာကွယ်ပါ။ တရားဝင်လက်မှတ်များနှင့်အတူဖြစ်စေ IP67 o IP68ပေါ်မူတည် ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်တရားမဝင်စွာဖြင့်ကော်နှင့်ကော်ဇောများဖြင့်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင်ပိုမိုအသုံးပြုရန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုမိုစဉ်းစားလာကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့် iPhone 6s တွင်ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုများပါ ၀ င်ပြီး၎င်းကိုရေခုခံနိုင်မှုကိုပိုမိုမြင့်မားစေသည် iPhone ကို7ရသောအခါ Apple က IP67 ကာကွယ်မှုနဲ့အသိအမှတ်ပြုထားတယ် ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်များ Xs နှင့် Xs Maxသူတို့မှာအကာအကွယ်ရှိတယ် IP68။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိပ်ကမ်းများ၌အကာအကွယ်မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ၊ စမတ်ဖုန်းစိုလာရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
အဆိုးဆုံးအချိန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသည်ရေထဲသို့ကျသောအခါသို့မဟုတ်စိုစွတ်လာသောအခါဖြစ်သည်။ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားမည်၊ အိုင်ပီမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းရှိ၊ မရှိဖြစ်စေအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတစ်ခုသည်၎င်းစိုစွတ်သည့်အချိန်တွင်အလုပ်ကိုရပ်တန့်စေနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးကြိုးစားရမည် အရည်ကိုထုတ်ယူပါ နှင့်အားလုံးအထက်, terminal ကိုအတွင်း၌ထုတ်ပေးစိုထိုင်းဆ။ The အကျယ်ပြန့်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည် ဒါဟာဂန္ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမဖြစ် ဆန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းစိုစွတ်သောအရည်သည်ရေဖြစ်သည်ဟူသောကိစ္စကိုအာရုံစိုက်ပြီးအောက်တွင်အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမည်။
2 ကျွန်တော့်ဆိပ်ကမ်းကစိုလာပြီးမဖွင့်ဘူး၊ ဖျက်လိုက်သလား။
လူအများစုကအများဆုံးသိသည် စျေးပေါရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သော အကယ်၍ ဆိပ်ကမ်းသည်ကုန်းပေါ်သို့ကျလျှင်၎င်းသည်ဆန်အတွက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မိုဘိုင်းဖုန်းစိုလာပါကအောက်ပါအဆင့်များမှာ -
မိုဘိုင်းကိုချက်ချင်းပိတ်ထားသည်။ ထိုအချိန်တွင်၎င်းအလုပ်ဖြစ်မလုပ်စစ်ဆေးမစစ်ဆေးပါနှင့်။ သေသည့်အထိပြtheနာပိုဆိုးလာနိုင်သည်။
ဆင်းမ်ကဒ်ကိုထုတ်ပါတယ် နှင့်တပ်ဆင်ထားလျှင်, ဘက်ထရီအဖုံးနှင့် ဘက်ထရီ သူ့ဟာသူ
terminal ကိုငါတို့ခန်းခြောက်တယ် ပြင်ပတွင်ပျော့ပျောင်းသောခြစ်ရာမဟုတ်သည့်အထည်ကိုအသုံးပြုသည်။
ဒီကိစ္စက၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ဒီကိရိယာကိုဆန်တစ်ဘူးထဲမှာထည့်လိုက်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဆန်ကဒီနည်းလမ်းကပိုပြီးထိရောက်လိမ့်မယ် ဘာမှမဖော်ထုတ်ဘဲ terminal ကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။
အခုငါတို့သာရှိသည် စပါးအစိုဓာတ်စုပ်ယူနိုင်မှုစွမ်းအားကအလုပ်မလုပ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းပါ။ နှင့်မိုဘိုင်းအတွင်းရှိစိုထိုင်းဆကိုယူပါ။ အလွန်တရာလိုအပ်သည့်ကိစ္စ မှလွဲ၍ ဖုန်းကိုမဖွင့်ရန်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းသတိရပါ။
ဒါဟာအကြံပြုသည် အနည်းဆုံး ၁၂ နာရီတိုင်းဆန်ကိုပြောင်းပါ ၎င်း၏စုပ်ယူနိုင်စွမ်းသည်မလျော့ချနိုင်ပါ။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်ဖုန်းပြန်ရှင်လာနိုင်သည်။ သို့သော်အများအားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်အတွင်းပိုင်းပျက်စီးပြီးအချို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ရေသည်ဖြတ်သန်းသွားသောနေရာနှင့်၎င်းကဲ့သို့သောဒြပ်စင်များကိုလှည့်ပတ်သည် botones, အ ကင်မရာ အားလုံးအထက်, the စပီကာသူတို့ကသူ့ခြေလှမ်းခံရလိမ့်မယ်နှင့် သူတို့စနစ်တကျအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခဏတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်မှာ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသိမ်းဆည်းထားနိုင်ရင်၊ ငါတို့ကအမြဲတမ်းလုပ်နိုင်တယ် ဒေတာအတွင်းပိုင်းကိုသိမ်းဆည်းရန်ကြိုးစားပါ ပြီးသားဘာလုပ်ရမှန်းဆုံးဖြတ်။
ဤအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ရေချိုနှင့်ရေကိုခွဲခြားရန်လိုအပ်သည် ရေငန်အဆုံးစွန်သောဆားကတည်းကကတည်းက ကြီးစွာသောတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်စွမ်းပါဝါမိုဘိုင်းအတွင်းရှိအချို့သောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောဥပမာအချို့သောကော်နက်ရှင်များသို့မဟုတ် Motherboard ကဲ့သို့သောသက်ရောက်မှုများဖြစ်သည် ဒါထိထိရောက်ရောက်အလုပ်မလုပ်ပါ ဆုံးရှုံးမှုမှမြစ်သို့၎င်းကိရိယာပျက်စီးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်မည်သည့်ကြိုးပမ်းမှုသည်မဆိုဤကိစ္စတွင်ဖြစ်သော်လည်း ကျနော်တို့နောက်ဆုံးခြေလှမ်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် ဖြစ်နိုင်သမျှအစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်၊ ဘေးအန္တရာယ်များမှရှောင်ရှားရန်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ပါ။
ကျနော်တို့ကအပြင်းအထန်ကြိုးစားနေပုံရတယ်၊ ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့သတိရရမယ် တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး terminal ကိုပိတ်ထားပါ၎င်းသည်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ပါကသို့မဟုတ် အဲဒါကိုဖွင့်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ ဒါကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့လျှင်။ ဤကဲ့သို့သောအချိန်နှင့်တင်းမာမှုများစွာနှင့်ဤအချိန်ကိုကျွန်ုပ်တို့မမှတ်မိနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုသိမ်းဆည်းခြင်း (သို့) သေခြင်းဆီသို့ ဦး တည်ခြင်းကွာခြားချက်သည် သတိရ လျှပ်စစ်မီးနှင့်ရေသည်သူငယ်ချင်းကောင်းမဟုတ်ပါ ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အနာရောဂါငြိမ်းစရာပိုကောင်းတယ်။ သို့သော်စိုစွတ်ပြီးစပါးနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်သေးဘဲဖွင့်ခြင်းမရှိပါက၎င်းသည်ကြီးမားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကံကောင်းခြင်းရှိမရှိ၊ အနည်းငယ်လှည့်ကွက်။
အကယ်၍ ဖန်သားပြင်အလုပ်မလုပ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်စေရမည်။ စိုစွတ်သောနောက်တွင်မျက်နှာပြင်မဖွင့်ပါကကျွန်ုပ်တို့မှဖော်ပြချက်မှမည်သည့်တုန့်ပြန်မှုမှမရပါကကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဘိုင်းပြောင်းလဲခြင်းကိုစတင်စဉ်းစားနိုင်သည်။. ၎င်းသည်မိုဘိုင်းမှလှုံ့ဆော်မှုအချို့ရရှိရန်နည်းလမ်းရှာခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ အလွယ်ကူဆုံး option ကိုဖြစ်ပါတယ် တစ်ယောက်ယောက်ကငါတို့ကိုခေါ်တယ်PIN ကုဒ်ရှိလျှင်သို့မဟုတ်လက်ကိုင်အသံတိတ်သွားလျှင်၎င်းသည်မည်သည့်အရာမျှမြည်မည်မဟုတ်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့်မှာပါလိမ့်မည် ကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်စက်ကိုအသိအမှတ်ပြုပါကအနည်းဆုံး၎င်းသည်ဖန်သားပြင်မှတဆင့်မည်သည့်အရာကိုမျှမမြင်နိုင်သည့်တိုင်၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်တယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
ဤကိစ္စတွင်, ကတစ် ဦး ချင်းစီမှတက်သည် ကိရိယာနှင့်အတူဘာလုပ်ရမှန်းဆုံးဖြတ်ပါ။ တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှု၏ရွေးချယ်မှုသည်အမြဲတမ်းရှိနေပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ပါကငွေတောင်းခံလွှာသည်သိသိသာသာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်စွမ်းရည်ကိုမြင်လျှင်သင်လုပ်နိုင်တယ် သင်ကိုယ်တိုင်အဲဒါကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားပါ၊ ဝဗ်ပေါ်ရှိသင်တွေ့ရှိသောအပိုင်းများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်အောက်ပါသင်ခန်းစာများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းအတွင်းရှိလေပူသည်ရေကိုအငွေ့ပျံစေနိုင်မည်ဟုထင်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲထားထားပါ လေပူ လေမှုတ်စက်ထဲကလာမယ့်တစ် ဦး ရှိပါတယ် လက်ကိုင်ဖုန်းခံနိုင်ရည်ထက်အပူချိန်ပိုများသည် ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဘိုင်း၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုလောင်ကျွမ်းနိုင်ပြီး၊ ပြန်မရတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုဖန်တီးပါ.
အချို့လေမှုတ်စက်များသည်လေထုကိုအခန်းအပူချိန်တွင်ထုတ်လွှတ်ခွင့်ပြုသည်မှာမှန်သော်လည်း၎င်းသည်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိရိယာအတွင်းရှိရေကိုချဲ့ထွင်၎င်းကိုပိုမိုသောနေရာများသို့ရောက်ရှိစေခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းအားမသိရှိဘဲကျန်းမာနေဆဲဖြစ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုပျက်စီးစေခြင်း။ ပိုကောင်းတယ် ရဲ့လေမှုတ်စက်ကိုမေ့လို့ရအောင်နှင့်ဆန်နည်းလမ်းကိုလိုက်နာကြပါစို့။
တစ်ခုချင်းစီကိုအမှုကွဲပြားခြားနားသော, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် ကျိုးပဲ့သောအရာကိုသိရန်ရောဂါရှာဖွေပါ။ ဆန်နည်းလမ်းကိုနောက်တစ်ခေါက် ထပ်မံ၍ ကံကောင်းခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘာမျှမဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။ အကြိမ်အနည်းငယ်အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးပါက၊ နောက်အဆင့်မှာဖုန်း၏အင်္ဂါရပ်တစ်ခုစီကိုအဘယ်အရာအလုပ်လုပ်သည်၊ မည်သည့်အရာကအလုပ်လုပ်သည်ကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ပျက်ကွက်ယေဘုယျပါ (ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်ဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘာမှမလုပ်ခြင်း) ကိစ္စသည် ပို၍ ရှုပ်ထွေးပြီးကျွန်ုပ်တို့လည်းလုပ်ရလိမ့်မည် မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်တစ်ခုကိုစဉ်းစားခြင်း။ ဒါပေမယ့်ကင်မရာကမြူဆွယ်နေပြီးကောင်းမွန်စွာအာရုံမစိုက်ဘူးဆိုတာမြင်ရရင်တော့အကောင်းဆုံးပါ သင်ခန်းစာရှာပါ ကွန်ယက်အတွင်းရှိရာနှင့်ချီသော အစိတ်အပိုင်းများကိုဝယ်ကြလော့ ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူမှကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်စတင်ပါ ငါတို့ဘာသာပြန်လုပ်.
iFixit ကဲ့သို့သောအထူးစာမျက်နှာများရှိကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားပို့ချသည့်သင်ခန်းစာများကိုပညာရှင်များမှပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးအီလက်ထရွန်းနစ်ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာအခြေခံအယူအဆများရှိသူများကိုရည်ရွယ်သည်။ ဒုတိယအရာကသိသာထင်ရှားသည် ကျနော်တို့အာမခံကိုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်device ကိုစိုစွတ်နေပြီဆိုပေမယ့်အောက်မှာရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းသူကတိုက်ရိုက်ဖျက်လိုက်လိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၏အူကြောင်ကြောင်နှင့်မရင်းနှီးပါက၎င်း terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်မေ့သွားလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးသောအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိုဖွင့ ်၍ ပြုပြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်၌များသောအားဖြင့်ရှိသည့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလုပ်မလုပ်ကြောင်းသိရန်လည်းလိုအပ်သည်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ် tools တွေထိုကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့သည်တွေ့ရလိမ့်မည်သေးငယ်သော screw နှစ်ခုယဉ်နိုင်မှ magnetized pentalobular ဝက်အူလှည့အဖြစ်။
အဖြေက ၉၉% ဖြစ်ပြီးရှင်းပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူတွေဟာအမြဲတမ်းအသုံးပြုသူတွေရဲ့ရှေ့ကိုတစ်လှမ်းပြီးတစ်ခြားမိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်းတွေမှာပါပြavoidနာတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ် အရည်အဆက်အသွယ်ညွှန်းကိန်း။ သူတို့ကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူး အဖြူရောင်စတစ်ကာများ, သူတို့သည်အရည်နှင့်အဆက်အသွယ်လာသောအခါအနီအရောင်လှည့်။ သတိရရမည်မှာအချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ရေငွေ့များနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမှသာရေချိုးခန်းအတွင်း၌ရေချိုးခန်းအတွင်းရှိ terminal ကိုစိုစွတ်စေခြင်းမရှိဘဲအရောင်များပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ ဒါကြောင့်သံသယမရှိဘဲ သူတို့ကအရမ်းအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြ၏.
၎င်းသည်အသုံးအများဆုံးမဟုတ်သော်လည်း ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေတည်ရှိ။ အကယ်၍ ဤညွှန်ကိန်းသည်အနီပြောင်းသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိပါက၎င်းသည်aဖြစ်သည် အဆိုပါအာမခံဖြင့်ဖုံးလွှမ်းရရန်ကြိုးစားနေအချိန်ဖြုန်း ဘာလို့လဲဆိုတော့အခြေအနေများတွင် IP ကာကွယ်မှုရှိသည့်စက်ပစ္စည်းများ၌ပင်စိုစွတ်နေလျှင်၎င်းကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သည်ဟုစွပ်စွဲခြင်းမှာအာမခံချက်ကိုပျက်ပြယ်စေကြောင်းရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရဲ့ရိုးသားကြပါစို့ IP67 သို့မဟုတ် IP68 ရေစိုခံလက်မှတ်နှင့်အတူ terminal တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းမတော်တဆတိုက်မိရန်အလွန်ခဲယဉ်းသောသူတို့၏အချစ်ဆုံးမိုဘိုင်းသည်စိုစွတ်သွားသည်ကိုမည်သူမျှမနှစ်သက်ပါ။ ငါတို့စိုစွတ်တယ်ဆိုရင်တောင်ဆက်အလုပ်လုပ်နေရင်တောင် \_ t အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာကတော့၎င်းကိုပိတ်ထားရန်၊ ဆန်နည်းလမ်းကိုလိုက်နာပြီးစောင့်ပါ။ သော့ကသော့ဖြစ်တယ် သည်းခံခြင်း.
ဤအချိန်နောက်ပိုင်းတွင်အလုပ်မလုပ်ပါကအကြောင်းရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိရမည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ပါက၎င်းကို ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ယူမလားသို့မဟုတ်၎င်းကိုမိမိဘာသာပြန်လည်ပြုပြင်မလားဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာမျှအလုပ်မလုပ်သောဖြစ်ရပ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် terminal အသစ်တစ်ခုကိုရှာပါ အစားထိုးအဖြစ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » ကျွန်ုပ်၏စမတ်ဖုန်းသည်ရေထဲသို့ကျသွားပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ပျောက်သွားတဲ့ iPhone ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ